Mpanamboatra sy mpamatsy Compressors China | KAIQUAN
Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny indostria toy ny fanaovana papermaking, sigara, fivarotam-panafody, fanaovana siramamy, lamba, sakafo, metallurgy, fanodinana mineraly, fitrandrahana, fanasana arintany, zezika, fanadiovana solika, indostrian'ny simika, herinaratra ary herinaratra. Ampiasaina ho an'ny fitrohana vovoka, fifantohana amin'ny banga, famerenana indray ny banga, fanamafisana ny banga, fanamainana vovoka, fanamafisam-peo, fanadiovana banga, fikirakirana banga, fanodinana banga, fanarenana entona, fanadiovana banga ary fomba hafa, ampiasaina hitresahana tsy azo ravana anaty rano, tsy misy ny entona sombina mivaingana mahatonga ny rafitry ny pumped ho banga. Satria ny suction entona dia isothermal mandritra ny fizotran'ny asa. Tsy misy velarana metaly mifampisintona ao anaty paompy, noho izany dia tena mety amin'ny paompy entona mora entona sy mipoaka na mihena rehefa miakatra ny mari-pana.
Haavo haben'ny rivotra: 3000-72000m3 / h
Isan'ny tsindry: 160hPa-1013hPa
Temperature range: Ny hafanan'ny paompy 0 ℃ -80 ℃; Ny maripana miasa 15 ℃ (isan-karazany 0 ℃ -60 ℃)
Avelao ny mpanelanelana amin'ny fitaterana: Tsy misy sombin-javatra matevina, gaona tsy mety simba na somary voavaha kely ao anaty tsiranoka miasa
Hafainganana: 210-1750r / min
Làlana fanafarana sy fanondranana: 50-400mm
1. Vokatry ny fitsitsiana angovo
Ny famolavolana modely hydraulic optimised dia manatsara be ny fahombiazan'ny paompy ao amin'ny faritra 160-1013hPa, noho izany dia mahomby kokoa sy mamonjy angovo.
2. Fandidiana malefaka sy fahamendrehana ambony
Famolavolana hydraulic nohavaozina, ny impeller dia mampiasa refy lehibe kokoa amin'ny savaivony, mba hananan'ny paompy fahombiazana avo kokoa noho ny paompy andiany hafa rehefa mahazo ny habetsahan'ny paompy mitovy aminy. Mandritra izany fotoana izany, ny famolavolana firafitra tsotra dia mahatonga ny fiasan'ny paompy ho marin-toerana sy azo itokisana, ary ambany kokoa ny tabataba.
3. Tombontsoa miavaka amin'ny rafitra
Rafitra marindrano tokana an-tokana, tsotra sy azo ianteherana, mora tazonina. Ny firafitry ny vatan'ny paompy miaraka amin'ny baffle dia afaka manamboatra paompy iray mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fepetra asa roa.
4. Fifanarahana matanjaka
Mba hihaonana amin'ny fitakiana fanoherana fahasimbana samihafa, ny ampahany mikoriana dia azo atao amin'ny fitaovana vy tsy misy fangarony. Ny faritra mikoriana dia atsofoka amin'ny alim-baravarankely fanoherana ny harafesin'ny harafesina mba hamenoana ny fepetra takiana amin'ny harafesina matanjaka. Ny tombo-kase dia misy safidy fonosana sy tombo-kase mekanika hahafeno ny fepetra takian'ny toe-javatra iasana samihafa
Teo aloha: Paompy vakumana 2BEX
Manaraka: HD Series Paompy mikoriana diagonaly mitsivalana